Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Ansu Fati Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
LB na-ewetara ya Akụkọ zuru oke nke Football Genius bụ onye kacha mara amara “Fati“. Anyị Ansu Fati Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Akụkọ Nleta Ansu Fati- Nyocha rue ụbọchị. Ebe e si nweta ya AS na UEFA.
Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya mbụ, nzụlite ezinụlọ, agụmakwụkwọ / ịkọ ọrụ mbụ, ndụ ọrụ mmalite, ụzọ iji wee mara akụkọ, ibilite na ama akụkọ, mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​ụdị ndụ ya, ndụ ezinụlọ wdg.
Ee, onye ọ bụla na-ahụ Fati dị ka ihe ọzọ na-esote na football ụwa. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Ansu Fati nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Anssumane Ansu Fati na ụbọchị 31st nke October 2002 nye nna ya, Boji Fati (onye ọkwọ ụgbọ ala mbụ) na nne, Lurdes Fati (onye na-elekọta ụlọ) na Bissau, Isi obodo Guinea-Bissau, West Africa. Ansu bịara n’ụwa dịka nwa nwoke nke abụọ na ụmụ nke 5 ụmụ amụrụ nne na nna ya mara mma nke e sere n’elu.
Nne na nna Ansu Fati-Nna ya- Boji Fati na nne- Lurdes Fati. Ebe e si nweta ya NdigboBuzz
Afọ anọ tupu amụọ Ansu Fati, agha obodo dara n'obodo ya. Ihe sochiri nke a bụ mbuso agha na 2003, afọ mgbe amuru ya. Ntuli a mere ka obodo ya tọgbọrọ n'efu ma mee ka ịda ogbenye jupụta ebe niile. Ndị nne na nna Ansu Fati tụrụ egwu maka ọdịnihu ụmụ ha, nke a kpatara Bori nna ya na-ahapụ Guinea-Bissau ịchọ ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ na mba ọzọ.
Bori buru ụzọ kwaga Portugal ebe ọ nwesịrị mbọ iji malite ịgba bọl na bọọlụ dị ala. Mgbe ọ nọ na Portugal, Bori nụrụ asịrị na Marinaleda, otu ime obodo na Spain na-enye ndị kwabatara ọrụ ọrụ. Nna Ansu mere ngwa ngwa hapụ Portugal gaa Spain iji nweta ọrụ ahụ.
Ọ bụ ihe nwute na chi enweghị isi na Spain ka Bori bidoro ịrịọ nri n'okporo ụzọ Marinaleda. O were ọnwa ole na ole tupu ohere erute ka Bori Fati zutere onye isi obodo Marinaleda na Seville onye nyere ya ọrụ dịka ọkwọ ụgbọ ala ya.
Ansu Fati bụbu onye ọkwọ ụgbọ ala na Mayor nke Marinaleda. Ebe e si nweta ya FB
Mgbe o gosichara onye isi ya na ịdị umeala n'obi ya na ịrụsi ọrụ ike, Onye isi nke Marinaleda kpebiri inyere Bori aka ịkpọta nwunye ya na ụmụ ya (gụnyere Ansu) site na Guinea-Bissau na Spain. Ansu Fati, mama ya, ụmụnne ya (Braima na Miguel) na nwanne ya nwanyị (Fati Djucu) kwagara Spain mgbe ọ dị afọ isii.
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ị maara?… Papa Ansu Fati bụbu onye egwuregwu bọọlụ n'oge ọ nọ na Guinea Bissau. Thou gha ezumike nká n'oge ọrụ dị ala iji chọọ ohere ka mma na Portugal ebe ọ kaghị eme ya, na-amanye ịla ezumike nká. O siiri Bori ike ịhapụ ịla ezumike nká mgbe ọ gara biri na Spen. O kpebiri inye ụmụ ya ndụmọdụ gụnyere Ansu ịghọ ndị na-eme ụkwụ.
Afọ 2009 bụ afọ dị egwu maka ịgba egwu Spanish ka Real Madrid nwetara C Ronaldo. Ihe osise nke Ansu Fati nke dị n’okpuru n’oge ahụ bụ onye Real Madrid na-akwado ọfụma na-eso akụkụ nile nke klọb gụnyere gụnyere ife arụsị.
Ansu Fati- Mmụta na Ọrụ Buildup.
Mgbe ọ ka na-amụ egwuregwu ahụ, nwanne ya nwoke nke okenye bụ Braima dị anya. Asọmpi egwuregwu nke ezinụlọ ha sitere na nwanne ya nwoke nke okenye bụ Ansu Braima Fati gafere ule wee banye na Sevilla FC. Site na ihe atụ, mmasị Ansu nwere maka egwuregwu ahụ mere ka ọ na-abịa ọnwụnwa na Sevilla na ọgbakọ ndị ọzọ nọ nso. Ezie na Sevilla FC rụpụtara, ọ nwetara ya ụlọ ọgbakọ dị nso aha ya bụ Herrera.
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Ndụ Ndụ Mmalite
Ansu Fati soro Herrera nwee oge tupu ya emechaa nabata Sevilla FC. Maka na ọ dị mma, Real Madrid na FC Barcelona ụlọ akwụkwọ mmuta wee na-achụ onye mbinye aka ya. N’okwu ya;
“Anọ m na Sevilla mgbe Real Madrid bịara, na-enye m ọnọdụ ka mma karịa Barcelona. Clublọ klọb abụọ ahụ bịara n'ụlọ ezinụlọ m iji mee ka ndị mụrụ m kwenye. Ihe mmepe a mere mmeghe Sevilla dika ha choro ka m nọrọ, ebe o nyere nwanne m nwoke aka ”
N'ihi ịnyefe nsogbu nke nwatakịrị kpakpando ha, Sevilla hapụrụ Ansu na-enweghị ịgba bọl otu afọ. Nke a emepụtaghị oge ọ bụla iji gbochie nrọ ya ịghọ pro. Na mmeghachi omume, ulo akwukwo FC Barca- Le Masia mere ihe iji nweta nwatakiri ahu a choro iru. Ha were afọ dị afọ iteghete, Ansu Fati ma nye ya ntọala achọrọ iji malite ọrụ ya.
Ndụ Nwa Ansu Fati na Lemasia. Ebe e si nweta ya NdigboBuzz
Ansu Fati ngwa ngwa ime ka mmuta na ulo akwukwo ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ndi La Masia nke ulo akwukwo nke FC Barcelona. Ị maara?… Ọ bụbu onye otu egwuregwu Takefusa Kobo aKA The Messi onye Japan tupu ndụ kewara ha ka Kobo sonyere Real Madrid. Kidsmụaka abụọ a (ndị e sere n’okpuru ebe a) ndị bụ ezigbo enyi bụ ndị kacha akara egwuregwu na agụmakwụkwọ n'ọtụtụ oge. Obere ihe ha maara na ha ga-abụ ndị mgba tupu ụbọchị ọmụmụ 20 ha.
Ansu Fati na Takefusa Kubo mere isi okwu n’oge ubochi ha na La Masia. Ebe e si nweta ya Trome
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Akpanwu akwukwo akuko
Ansu Fati malitere ime ka ya na La Masia nwee ike ịmara tupu ọ dị afọ iri na ụma. Ị maara?… Ọ kwalitere ndị otu ọsọ ọsọ ọsọ bụrụ ọfụma na usoro a.
Ihe akaebe na Ansu Fati bụbu onye isi La Masia. Ekele diri IG
Naanị oge Ansu na-achọ igosipụta uru ọ bara dị ka onye isi, oge kacha ala ntorobịa ya mere. O nwere ukwu okpukpu okpukpu abụọ di egwu. Ihe a jọgburu onwe ya mere na Disemba 2015 mgbe ọgụ siri ike sitere na onye na - agbachitere Espanyol hapụrụ Ansu Fati ya na tibia ma ọ bụ fibila n'ụkwụ aka nri ya. Nke a mere ka ọ nọrọ ọnwa iri n'ogologo yana ọtụtụ oge n'ụlọ ọgwụ. N'okpuru ebe a bụ Braima na-arụ nnukwu ọrụ nwanne ya mgbe ọ na-anọnyere ya na obere nwanne ya n'oge oge ọ ga-agbake.
Nwanne ya nwoke na-elekọta Ansu Fati mgbe ọ na-agbake. Ekele diri IG
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Na-ewu ewu Akụkọ
Imirikiti ndị egwuregwu maara Ansu Fati ga-ekwenye na mmerụ ahụ gbajiri ụkwụ bụ ma ọ gbanwee oge ọrụ ya. Mgbe ọ ka nọ n’ọnọdụ mgbake ya, mkpebi siri ike Ansu Fati na-eto ma na ọ laghachitere n’otu isi iji gosipụta rdị ka mkpụrụ akụ na-akụ. O diri oke ịrị elu nke onye di elu n’onwa ole na ole gara aga ka o buru otu n’ime ulo kachasi nma nke ulo akwukwo ulo akwukwo nke FC Barcelona.
Ansu Fati meteoric na-ebili na-ewu ewu mgbe ọ gbakechara site na mmerụ ahụ. Ekele diri IG.
Ansu Fati chịrị football ndị ntorobịa wee gaa n'ihu na-eme ya mgbe ọ gbakechara. Na 24 July 2019, ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na ndị isi otu FC Barcelona, ​​na-ekwenye na nkwekọrịta ahụ ruo 2022. N'oge a, obere oge ọhụụ, onye ọ bụla nọ n'ụlọ ya na-enwe nchegbu maka mpụta izizi ya.
TRBỌCH.: Mgbe nchere ahụ ka nọ na-aga n'ihu, Ansu Fati onye bụ 16 afọ n'oge ahụ nwere mmachi n'okpuru iwu Spanish ka ọ ghara ịgba bọọlụ ozugbo ọ bụ 9 pm. Iwu na Spain chọrọ ka klọb ghara igwu ndị na-emeghị ihe egwuregwu n'oge ememme abalị belụsọ ma ha natara nkwenye site na ndị mụrụ ha.
na Ousmane Dembele na Luis Suarez onye merụrụ ahụ, onye njikwa Barca Ernesto Valverde kpebiri inye Ansu Fati gbaa. Na ihu ọma maka nwa nwoke ahụ sitere na Guinea Bissau, ndị mụrụ ya kwetara ka ọ hapụ ụlọ iji banye n'ihe ize ndụ n'abalị ma mezuo nrọ ya.
Ansu Fati bụ naanị afọ 16 na ụbọchị 298 n'oge ọ nwetara nkeji izizi nke mbụ ya n'okpuru eriri ya. Mgbapụta a mere ka o nweta nturu ugo nke ịghọ onye egwu kachasị okenye nke ịnọchite anya klọb ahụ kemgbe 1941 gachara Vicenc Martinez (afọ 16 na ụbọchị 280). Ihe osise nke Ansu na-ese n'okpuru wee merie ndekọ nke ịghọ nwa akwụkwọ LaLiga nke ikpeazụ nke Barcelona.
Ansu Fati meriri site n'ịghọta onye mgbaru ọsọ LaLiga nke ikpeazụ nke Barca. Ebe e si nweta ya SL
Ị maara?… Ọhụụ ahụ na ihe mgbaru ọsọ Ansu nwetara ya site n'aka ìgwè mmadụ ahụ, gụnyere Thiago nwa nwoke Lionel Messi onye lere ya anya si n'elu-ulo. Obi abụọ adịghị ya, Ansu emeela ka ụwa mata na ọ bụ nkwa ọzọ mara mma nke ntinye aka ndị Africa na ndị otu klọb ahụ Samuel Etoo. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na-ewu ewu, o doro anya na ọtụtụ ndị ịgba egwu ga-ajụla ajụjụ banyere onye enyi nwanyị Ansu Fati nwere ike ịbụ. Enweghị agọnarị eziokwu ahụ bụ na ihu nwa ya, anya ya mara mma yana ụdị egwuregwu ya agaghị eme ka ọ bụrụ osisi vaịn na-adọrọ adọrọ nye ụmụ nwanyị.
Ọnye na-bụ Ansu Fati Nwanyị? Ekele diri IG
Dịka n'oge edere, dabere na ozi ya na njikwa mgbasa ozi ya, ọ pụtara na Ansu Fati ahọrọla ilekwasị anya na ọrụ ya. Enweghị ozi na-ekpughe ụzọ ọ bụla na ndụ nzuzo. Eziokwu a na - eme ka o siere ndị mgbasa ozi ike ịnakọta ozi ọ bụla gbasara ndụ ịhụnanya ya dị ugbu a na akụkọ ntolite.
Agbanyeghị, n'ihi ntorobịa ya na eziokwu na FC Barcelona nwere ike ịgbaghara ndị na-eto eto na-enweghị ike imehie mgbaghara, ọ ga-ekwe omume na Ansu Fati agaghị enwe onye ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ na-elekwasị anya na-eme ka ọ bụrụ nnukwu na ndị Spanish. Mana onye ma? !!… Enwere ọtụtụ ndị na - eto eto ọgbọ ya, ndị ka nwere ndị enyi nwanyị. Yabụ, anyị ka nwere ike ịkọ na ọ nwere ike nwee enyi nwanyị mana ọ chọrọ karịa ịme ya n'ihu ọha.
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Ndụ nke Onye
Tomata ndụ onwe onye nke Ansu Fati ga - enyere gị aka ịmata ya nke ọma.
Na-amalite, ọ na -akpọ ngwa ngwa ma nwee ọgụgụ isi, onye ga-eme nchọpụta ruo mgbe ọ chọpụtara ụzọ pụrụ iche nke ịtụ anya karịa. Ọzọkwa, Ansu Fati bụ onye nwere ike imeghari ume ya (ma nke ọma ma nke ọjọọ) nke gbara ya gburugburu. N'ikpeazụ, ọ bụkwa onye na-eche echiche miri emi nke mgbe ụfọdụ na-ahọrọ ịnọ naanị ya na ihe ọ bụla iji weghachi ike ya.
Ndụ Eziokwu Ndụ Ansu Fati- tomara ụdị onye ọ bụ. Ekele diri IG
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Ndụ Ezinụlọ
Ọ bụghị iwu na a ga-amụ gị na ngaji ọlaọcha n'ọnụ gị iji rụpụta nnukwu ihe na ndụ. Okwu ndị a nwere nnukwu ibu nye Ansu Fati na ndị otu ezi na ụlọ ya nke e sere n’okpuru.
Ndị Ezinaụlọ Ansu Fati. Ekele diri IG
Nna Ansu Fati Bori nwere obi mmụọ otu oge mgbe ọ na-ekwu maka egwuregwu asọmpi mbụ nke nwa ya nwoke maka Barcelona. N'okwu ya: “Ugbu a enwere m ike ịnwụ taa! Ndụ m emezuola taa, ọ bụrụgodị na ọnwụ abịa. ”Bori gwara redio na mpaghara mgbe ọ hụchara nwa ya nwoke ka ọ na-amalite ịgba akwụkwọ. Ọ nọ n'akụkụ mgbasa ozi na-adịghị ka nwunye ya (Ansu Fati's mum) onye na-eme ka profaịlụ dị ala.
Banyere sumụnne Ansu Fati: Ansu Fati nile ụmụnna bụ; Braima (okenye ya) na Miguel (nke dịkarịsịrị nta) na Miguel (nke ọdụdụ) bụkwa ndị na-agba bọl, ị nwechaghị ike dịka Ansu.
Ị maara?… Nke dikariri nke nwanne Ansu Fati (Miguel) bu ezigbo enyi na onye otu Thiago Messi (Nwa nwoke Lionel Messi). Ha abụọ dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ gara ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ FC Barca- La Masia. N'ikwu banyere afọ na oge ezinụlọ Fati kwagara Spain, o doro anya na a mụrụ Miguel mara mma (nke a na-ese foto n'okpuru).
Zute Miguel Fati- Nwanne Ansu
Asides Braima (nwanne nwoke okenye nke Ansu), nwanne ya ndị nke ọzọ na-egwuri egwu maka ụlọ akwụkwọ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama La Masia nke FC Barcelona. Nwanne nwoke nke nwere nleba anya Braima nọ ugbua na ụgwọ maka Calahora dịka n'oge edere.
Nwanna Ansu Fati- Miguel Fati. Ekele diri IG
Banyere Nwanna Nwanne Ansu Fati: Djucu bụ nwanne nwanyị mara mma nke Ansu Fati. Ọ nwere ike ịbụ afọ nke abụọ karịa nwanne ya nwoke bụ Ansu. Dabere na akaụntụ Instagram ya, Djucu na-eme ncheta ọmụmụ ya kwa Jenụwarị 20th.
Zute Nwanna Nwanyị Fatis- Djucu Fati. Ekele diri ya Akaụntụ IG
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - LifeStyle
Maka Fati, enwere ihe doro anya dị iche na ịgba bọọlụ na ikpori egwu. Mgbe oge ịgba bọọlụ agwụla, Ansu Fati hụrụ onwe ya n'anya na Ibiza na ebe ndị ọzọ mara mma na Spain. A na-ahụkarị ya ka ọ nọ na njem ụgbọ mmiri yana ụgbọ mmiri.
Ansu Fati- Onye hụrụ Spain n'anya na oke osimiri. Ekele diri IG
A na - enye Ansu ọzụzụ zuru oke ịrapara na mmefu ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-arapara n'ahụ obere ụgbọala na igwe na-enweghị ike. Ọ naghị atụ egwu ọrụ siri ike nke itinye onwe ya na ezinụlọ ya n'ọnọdụ ezigbo ego.
Sugbọ Ansu Fati na Ride- LifeStyle Facts. Ekele diri IG
Akụkọ gbasara nwatakịrị Ansu Fati gbakwunyere na - - - Eziokwu Na-ezighị ezi
Cool enyi na Lionel Messi: Abalị abalị Ansu Fati mere nke ọ gbabara ihe mgbaru ọsọ mbụ ya La Liga nwetara nke ka nke ọma mgbe mkpu ikpeazụ. You maara?… Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, onye ọfulụ nwere ọ Messiụ nyere Lionel Messi obi ekele. Onye ọkpụkpọ ụwa kachasị mma oge niile kesara foto ahụ (nke dị n'okpuru) na akaụntụ Instagram ya nke nwetara ihe karịrị nde 6.3 nwere mmasị dịka ọ dị n'oge ede.
Ansu Fati na Lionel Messi bụ ezigbo enyi
Ị maara?… Mmechi mmekọrịta Ansu Fati na Messi bụkwa n'ihi mmekọrịta nke kekọrọ n'etiti nwanne ya nwoke nke obere na nwa nwoke onye isi egwuregwu Thiago Messi.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ nwata anyị nke Ansu Fati gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.